Fampandrenesana headphones mividy fampiroboroboana ho an'ny mpianatra ho any Eropa | Avy amin'ny mac aho
Ny iray amin'ireo safidy azontsika ao amin'ny magazay Apple raha mpianatra isika, manan-janaka amin'ny oniversite, mpampianatra na ampahany amin'ny sehatry ny fanabeazana amin'ny fomba iray na hafa, dia ny fahazoana fihenam-bidy amin'ny vidiny farany an'ny Manzana. Ary ankehitriny koa rehefa miditra fahavaratra isika mahazo headphone tsy misy tariby Beats ianao rehefa mividy Mac, iPad na iPhone amin'ny fianaranao ianao izay ao anatin'ny fampiroboroboana. Ankoatra ny famonjena azy io izay efa ananantsika tamin'ny fividianana Mac na iPad ho an'ny sehatry ny fanabeazana.
Ny vokatra Apple tsirairay avy dia manome karazan-kapoka isan-karazany ary mifanaraka amin'ny vidin'ny fitaovana io. Eny, Apple te-hanombohanao ny fahavaratra amin'ny fomba tsara indrindra ary ankoatry ny fihenam-bidy dia manampy iray amin'ireo karazana headphone roa ireo Beats Solo 2 Wireless sy Powerbeats2 Wireless.
Amin'ny tranga mividy Mac Ho fanampin'ny fihenam-bidy mifanaraka amin'izany avy amin'ny sehatry ny fanabeazana dia mahazo Beats Solo2 Wireless ianao. Amin'ny ankapobeny, ny Mac rehetra dia miseho amin'ny fampiroboroboana saingy miankina amin'ny orinasa ihany io, koa zahao aloha alohan'ny hividianana Mac izay ao anatin'ny fampiroboroboana.
Raha izay hovidintsika no IPAD izay hoentinay miaraka aminay dia finday Powerbeats2 Wireless maimaim-poana. Ny zavatra tsy tokony ho adino dia ity tolotra ity dia manan-kery ihany ho an'ny iPad Pro (farafaharatsiny izany no azoko) ary rehefa mametraka ny ampahany amin'ny baiko isika dia afaka misafidy ny hanova ny Powerbeats2 Wireless ho an'ny Beats Solo2 Wireless manampy € 100 amin'ny vidiny. Ny fihenam-bidy ho an'ny headphone Beats dia hiseho amin'ny ora fiovana.
Ary farany fa tsy kely indrindra dia manana ny iPhone isika. Amin'ity tranga ity, ny fampiroboroboana Powerbeats2 Wireless dia rehefa mividy maodely iPhone 6 na 6s / Plus ary avelany hanao toy izany koa isika fifanakalozana ny Powerbeats2 Wireless ho an'ny Beats Solo2 Wireless manampy € 100 amin'ny vidiny farany. Ao amin'ny iPhone dia tsy misy safidy hampihenana ihany koa ho an'ny sehatry ny fanabeazana.
Tonga any Eropa ny fampiroboroboana ary efa hitanao daholo ny antsipiriany rehetra ao amin'ny tranonkala alefan'i Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Fampiroboroboana ny fividianana headphone ho an'ny mpianatra Hits Europe